Level အဆင့်ဆင့် English Quiz (2) အမေး / အဖြေ နှင့် ရှင်းလင်းချက်များ - Learn English Actively and Effectively in Yangon !!! 09 4311 5202 ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
မတိုးတက်ဘူး ဆိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ... ?
မိမိဘာသာ လေ့လာလိုသူများ အတွက်
Listening Skill ဘယ်လို လေ့ကျင့်မလဲ ?
စာအုပ် ( ၁ )
Home / Beginner to Elementary Level / Elementary to Pre-intermediate Level / Intermediate Level သင်ခန်းစာများ / Level အဆင့်ဆင့် English Quiz / Level အဆင့်ဆင့် English Quiz (2) အမေး / အဖြေ နှင့် ရှင်းလင်းချက်များ
Level အဆင့်ဆင့် English Quiz (2) အမေး / အဖြေ နှင့် ရှင်းလင်းချက်များ
Zin Zae 10:42 PM Beginner to Elementary Level , Elementary to Pre-intermediate Level , Intermediate Level သင်ခန်းစာများ , Level အဆင့်ဆင့် English Quiz Edit
Level အဆင့်ဆင့် English Quiz (2)
အမေး / အဖြေ နှင့် ရှင်းလင်းချက်များ
သက်ဆိုင်ရာ Level အလိုက်
အနည်းဆုံး ၁ ကြောင်းတော့ ရအောင် ဖြေဆိုပြီး
နောက်ရက်တွေမှာလည်း အဲ့လို လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ဆက်တင်ပေးသွားပါ့မယ်
Active English သင်တန်း
" ဒီ စာအုပ်က စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် " ဆိုတာကို ဘယ်လိုပြောရမလဲ
(A) This book is interested.
(B) This books is interest.
(C) This books is interesting.
(D) I am interested this book.
(E) This book interesting.
" ငါက စီးပွားရေး စိတ်ဝင်စားတယ် "
(A) I interest in business.
(B) I am interesting in business.
(C) I am interested on business.
(D) I interest business.
(E) I am interested in business.
You really like football !
And so you can say ....
(A) I passionate football.
(B) I am passionate football.
(C) I am passionate football.
(D) I passion football.
(E) None of the above !
The correct way to say is ------------
Complete this quote.
(P------) is one great force that unleashes creativity,
because if you're (p-----) about something, then you're more willing to (-----) risks.
အဖြေကို post အောက်နားမှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်
English ဘာသာစကား လေ့လာသူများအတွက် အထောက်အကူပြု
Mobile Application နဲ့ Ebooks များကို
www.facebook.com/activenglishapp မှာ တင်ပေးထားပါတယ် ။
သွားပြီး အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ ။
ရှာမတွေ့ရင်လည်း Comment/Message Box မှာ တောင်းခဲ့နိုင်ပါတယ် ။
#ActiveEnglishသင်တန်း က ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့
English ဘာသာစကားလေ့လာသူများ အထောက်အကူပြု Group ကိုလည်း
အောက်ပါ လင့်ကနေ တဆင့် သွား Join နိုင်ပါတယ် ။
C. This book is interesting.
E. I'm interested in business.
ကိုယ်က ( တစ်ယောက်ယောက်က ) စိတ်ဝင်စားရင် Interested သုံးရပြီးတော့ အနောက်က in + Noun လိုက်ရပါမယ် ။
တစ်ခုခုက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ရင်တော့
Interesting လို့ ပြောရပါမယ် ။
နှစ်ခုလုံးက Adjective တွေဆိုတော့
S + Vbe + . . . ဆိုတဲ့ Pattern နဲ့ သုံးနိုင်ပါတယ် ။
E. ပေးထားတာ တစ်ခုမှ မမှန်ပါ ။
I'm passionate about football. လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
passionate က adjective ဖြစ်ပါတယ် ။
အနောက်က about + Noun ဆိုပြီး တွဲသုံးရပါမယ် ။
about ကျန်ခဲ့လို့ အဆင်မပြေပါဘူး ။
(Passion) is one great force that unleashes creativity,
because if you're (passionate) about something, then you're more willing to (take) risks.
- Passion က Noun
- Passionate က Adjective ပါ
အဓိပ္ပာယ်က အလွန်စွဲလန်း ပြင်းပြလိုချင်သော ( အရာ ) ဖြစ်ပါတယ် ။
- take risks ကတော့ စွန့်စားတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ အတွဲလိုက် သုံးနိင်ပါတယ် ။
- unleash က verb ပါ ။
တစ်စုံ တစ်ခုကို ( ရုတ်တရက် ) ဖွင့်ထုတ် လိုက်တာ ။ ပွင့်ထွက်/ပေါ်ထွက်လာစေတာ ကို ဆိုလိုတာပါ ။
ဒီမေးခွန်း နဲ့ ဖြစ်သင့်တဲ့ အဖြေလေးတွေကို
နားလည် လိမ့်မယ် လို့ ယူဆပါတယ် ။
English ဘာသာစကားစွမ်းရည် များ တစ်နေ့တခြား တိုးတက်လာပြီး
အသိပညာ ဗဟုသုတ များ
ရယူ ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေဗျာ
နောက်ထပ် Post တွေမှာ
ဝင်ဖြေ/ဝင် လေ့ကျင့်ချင်သူတွေ အနေနဲ့
ဒီ Post အောက်မှာ Comment တစ်ခုခု
ပြီးရင် ( www.facebook.com/mmenglishlearning ) Page ကို
*See first ပါ ထပ်လုပ်ထားလိုက်ပါဗျာ ။
ဒါဆို Post တွေကို မလွတ်တမ်း ဖတ်လို့ရမှာပါ :)
Founder & Trainer
Active English Language Centre
ဖုန်း - 09 4311 5202 / 09 2522 74890
အမှတ် ၂၉ / A ၊ မြေညီထပ် ၊ ၁၆၇ လမ်း ၊ တာမွေကြီး (ခ) ရပ်ကွက် ၊ တာမွေမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
( တာမွေ အဝိုင်းထိပ် မှတ်တိုင် / ကျောင်းရှေ့ မှတ်တိုင် တို့တွင် ဆင်းပါ ။
( တင်္နလာ မှ ကြာသပတေး = ၅ ချိန် )
7:00-8:30 AM / 9:00-11:00 AM/
4:00-5:30 PM / 5:30-6:30 PM /
( စနေ / တနင်္ဂနွေ = ၅ ချိန် )
7:00-8:30 AM / 10:00AM - 12:00 Noon/
2:00-4:00 PM / 4:00-6:00 PM /
Level အဆငျ့ဆငျ့ English Quiz (2)
အမေး / အဖွေ နှငျ့ ရှငျးလငျးခကျြမြား
သကျဆိုငျရာ Level အလိုကျ
အနညျးဆုံး ၁ ကွောငျးတော့ ရအောငျ ဖွဆေိုပွီး
နောကျရကျတှမှောလညျး အဲ့လို လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ ဆကျတငျပေးသှားပါ့မယျ
Active English သငျတနျး
" ဒီ စာအုပျက စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတယျ " ဆိုတာကို ဘယျလိုပွောရမလဲ
(C)This books is interesting.
" ငါက စီးပှားရေး စိတျဝငျစားတယျ "
အဖွကေို post အောကျနားမှာ ထညျ့ပေးထားပါတယျ
English ဘာသာစကား လလေ့ာသူမြားအတှကျ အထောကျအကူပွု
Mobile Application နဲ့ Ebooks မြားကို
www.facebook.com/activenglishapp မှာ တငျပေးထားပါတယျ ။
သှားပွီး အခမဲ့ Download ရယူနိုငျပါတယျဗြာ ။
ရှာမတှရေ့ငျလညျး Comment/Message Box မှာ တောငျးခဲ့နိုငျပါတယျ ။
#ActiveEnglishသငျတနျး က ပွုလုပျပေးထားတဲ့
English ဘာသာစကားလလေ့ာသူမြား အထောကျအကူပွု Group ကိုလညျး
အောကျပါ လငျ့ကနေ တဆငျ့ သှား Join နိုငျပါတယျ ။
ကိုယျက ( တဈယောကျယောကျက ) စိတျဝငျစားရငျ Interested သုံးရပွီးတော့ အနောကျက in + Noun လိုကျရပါမယျ ။
တဈခုခုက စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးတယျလို့ပွောခငျြရငျတော့
Interesting လို့ ပွောရပါမယျ ။
နှဈခုလုံးက Adjective တှဆေိုတော့
S + Vbe + . . . ဆိုတဲ့ Pattern နဲ့ သုံးနိုငျပါတယျ ။
E. ပေးထားတာ တဈခုမှ မမှနျပါ ။
I'm passionate about football. လို့ ပွောရမှာ ဖွဈပါတယျ ။
passionate က adjective ဖွဈပါတယျ ။
အနောကျက about + Noun ဆိုပွီး တှဲသုံးရပါမယျ ။
about ကနျြခဲ့လို့ အဆငျမပွပေါဘူး ။
အဓိပ်ပာယျက အလှနျစှဲလနျး ပွငျးပွလိုခငျြသော ( အရာ ) ဖွဈပါတယျ ။
- take risks ကတော့ စှနျ့စားတယျ ဆိုတဲ့နရောမှာ အတှဲလိုကျ သုံးနိငျပါတယျ ။
တဈစုံ တဈခုကို ( ရုတျတရကျ ) ဖှငျ့ထုတျ လိုကျတာ ။ ပှငျ့ထှကျ/ပျေါထှကျလာစတော ကို ဆိုလိုတာပါ ။
ဒီမေးခှနျး နဲ့ ဖွဈသငျ့တဲ့ အဖွလေေးတှကေို
နားလညျ လိမျ့မယျ လို့ ယူဆပါတယျ ။
English ဘာသာစကားစှမျးရညျ မြား တဈနတေ့ခွား တိုးတကျလာပွီး
အသိပညာ ဗဟုသုတ မြား
ရယူ ပိုငျဆိုငျ နိုငျပါစဗြော
နောကျထပျ Post တှမှော
ဝငျဖွေ/ဝငျ လကေ့ငျြ့ခငျြသူတှေ အနနေဲ့
ဒီ Post အောကျမှာ Comment တဈခုခု
ပွီးရငျ ( www.facebook.com/mmenglishlearning ) Page ကို
*See first ပါ ထပျလုပျထားလိုကျပါဗြာ ။
ဒါဆို Post တှကေို မလှတျတမျး ဖတျလို့ရမှာပါ :)
ဖုနျး - 09 4311 5202 / 09 2522 74890
အမှတျ ၂၉ / A ၊ မွညေီထပျ ၊ ၁၆၇ လမျး ၊ တာမှကွေီး (ခ) ရပျကှကျ ၊ တာမှမွေို့နယျ ၊ ရနျကုနျမွို့ ။
( တာမှေ အဝိုငျးထိပျ မှတျတိုငျ / ကြောငျးရှေ့ မှတျတိုငျ တို့တှငျ ဆငျးပါ ။
( တင်ျနလာ မှ ကွာသပတေး = ၅ ခြိနျ )
( စနေ / တနင်ျဂနှေ = ၅ ခြိနျ )
About Zin Zae
♦ Active English စကားပြော သင်တန်း တည်ထောင်သူ .... ( www.ActiveEnglishMyanmar.com ) ( www.facebook.com/MmEnglishLearning ) ♦ Myanmar Midas Touch အမည်ဖြင့် Social media marketing - ( Consulting and services ) လုပ်ငန်း တည်ထောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူ ... ♦ လူငယ်များ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်စေရေးအတွက် အကြံဉာဏ် ၊ ဗဟုသုတများကို ( www.sharingkozinzae.wordpress.com ) / www.facebook.com/myanmardream မှတဆင့် မျှဝေနေသူ ... ♦ တစ်နည်း အားဖြင့် " ကြယ်ငါး ကောက်နေသူ " :) ♦ ကျွန်တော်ဟာ ....အချိန်တိုင်း အချိန်တိုင်းမှာ ဒီလို သနားစရာကောင်းတဲ့ ကြယ်ငါးလေးတွေကို.... သူတို့ရှင်သန်ရာ ပင်လယ်ပြင်ထဲပြန်ရောက်အောင် ပြန်ပစ်ပေးနေတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကလွဲလို့ .... ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ.... :) ( zinzae@gmail.com ) - 09 25000 5174
Present Tense အသုံးပြုသင့်တဲ့ အခြေအနေ ၈ မျိုး
♦ Present Tense အသုံးပြုသင့်တဲ့ အခြေအနေ ၈ မျိုး ♦ ============================== အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါလေ့လာတဲ့ အခါမှာ ကျောင်းသား အများစု တိုင်ပ...
Video သင်ခန်းစာတွေ လေ့လာချင်ရင် အောက်ပါ ပုံကို နှိပ်လိုက်ပါ
Mobile App ကနေ လေ့လာချင်ရင် အောက်ပါ ပုံကို နှိပ်ပြီး Download ယူပါ
ဖတ်ချင်တာ ဒီမှာ ရှာပါ
Facebook ပေါ်မှာ လေ့လာအားပေးရန်
English ဘာသာစကားကို မိမိဘာသာ လေ့လာလိုသူများ အတွက်
♦ English ဘာသာစကားကို မိမိဘာသာ လေ့လာလိုသူများ အတွက် ================================ အွန်လိုင်းကနေ လှမ်းမေးတဲ့ လူတွေများတယ် ။ သင်တ...
English ဘာသာစကား လေ့လာရန် Mobile Application ( မေတ္တာလက်ဆောင် / အခမဲ့ )
English ဘာသာစကား လေ့လာရန် Mobile Application Active English ( MmEnglishLearning Page ) ရဲ့ Fans များ ၊ Active Englishသင်တန်းသူ သင်တန်းသ...
ActiveEnglish သင်တန်းသား ၊ သင်တန်းသူတွေထဲမှာ အက ဝါသနာ ပါတဲ့ လူများ ရှိလားဗျ ? :D
# ActiveEnglish သင်တန်းသား ၊ သင်တန်းသူတွေထဲမှာ အက ဝါသနာ ပါတဲ့ လူများ ရှိလားဗျ ? ရှိရင်တော့ ဒီ MEBC သင်တန်းလေးကို စုံစမ်းကြည့်ပါဗျ...
Verb to Be ကို အသုံးချပြီး Wh Question များမေးခြင်း
Verb to Be ကို အသုံးချပြီး Wh Question များမေးခြင်း ---------------------------------------------------- အခြေခံ အားနည်းတဲ့ English ဘာသာစက...
Active English သင်တန်း အကြောင်း
အခမဲ့ စာအုပ် & ဖုန်း software
Vocabulary လေ့လာရန် ( 56 )
Elementary to Pre-intermediate Level ( 55 )
Quotes ဆိုရိုးစကားများ လေ့လာရန် ( 49 )
Learning English Via Quotes ( 48 )
သင်တန်း အကြောင်း စုံစမ်းရန် ( 43 )
သင်တန်း အချိန်ဇယား ( 35 )
Grammar - သဒ္ဒါ နှင့် ဆက်စပ်သော သင်ခန်းစာများ ( 27 )
Intermediate Level သင်ခန်းစာများ ( 26 )
English ဘာသာစကား လေ့လာနည်း ( 23 )
Pre-intermediate Level သင်ခန်းစာများ ( 23 )
အားသစ်ဖြစ်ဖို့ အတွေးစများ ( 21 )
Beginner to Elementary Level ( 20 )
Idioms လေ့လာရန် ( 17 )
Level အဆင့်ဆင့် English Quiz ( 15 )
Video သင်ခန်းစာများ (9)
Conversations ( 8 )
သင်ခန်းစာများ ( 8 )
Software / စာအုပ် အခမဲ့ ယူရန် (7)
ဟာသများနှင့် English ဘာသာစကားလေ့လာခြင်း (7)
အပြန်အလှန် စကားပြော သင်ခန်းစာများ (7)
ကြီးပွားတိုးတက်ရေး ၊ စီးပွားရေး (7)
အထူး ကြေငြာချက် (6)
English သင်ခန်းစာများ (5)
မေတ္တာလက်ဆောင် ရယူရန် (5)
Listening သင်ခန်းစာများ (4)
စာအုပ် အခမဲ့ ယူရန် (4)
About Class (3)
Reading လေ့ကျင့်ရန် (3)
Software အခမဲ့ ယူရန် (3)
ကြော်ငြာ (3)
English Stories/fictions များ ဖတ်ရှုရန် (2)
mobile application (2)
ပုံပြ English စာ (2)
သီချင်းတွေနဲ့ English စာ လေ့လာမယ် (2)
ဖျော်ဖြေရေး (2)
Learning English Via Images ( 1 )
စီးပွားရေး ( 1 )
ပညာဒါန အစီအစဉ် ( 1 )
သတိပြုရန် ( 1 )
သီချင်းများနှင့် English စာလေ့လာရန် ( 1 )
သင်တန်းသားများ အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်အောင် စေတနာထား သင်ကြားပေးနေတဲ့ Active English သင်တန်း ဖုန်း - 09 4311 5202 / 09 25000 5174 အမှတ် ၂၈ ၊ ၁၆၇ လမ်း ၊ တာမွေ မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
Copyright © 2015 Learn English Actively and Effectively in Yangon !!! 09 4311 5202
Created By Active English Sora Templates Free Blogger Templates